Uyilungelelanisa njani iMixholo yeTheyibhile kwiikholamu nakwiiRow kwiDreamweaver
Ukucoca ulungelelwaniso lwezinto kwiikholamu kunye nakwimiqolo kwenza itafile yakho icoceke kwaye ifundeke lula. Ukufezekisa oko kujongeka kwi-Dreamweaver kunokuba yinkohliso kuba awunakulawula kangako kwi-HTML njengoko unenkqubo efana ne-Excel, apho unokulungelelanisa amanani ukuya kwindawo yedesimali, umzekelo. Kwitafile ye-HTML, unokulungelelanisa umxholo weekholamu ngasekhohlo, ekunene, okanye embindini.
Amanyathelo alandelayo achaza iziseko zokuhambelana kwemigca kunye neekholamu kwitafile yakho (kwaye ufumana iingcebiso zokusombulula iingxaki zokuhambelana kwakhona):
Khetha ikholamu okanye umqolo ofuna ukutshintsha ulungelelwaniso kuwo.
Beka isalathisi kwiseli yokuqala kwikholam okanye kumqolo ofuna ukulungelelanisa; emva koko, cofa uze utsale ukuqaqambisa zonke iikholamu okanye imiqolo ofuna ukuyitshintsha.
Khetha ulungelelwaniso ukhetho kwiHorz (ethe tye) okanye Vert (nkqo) uluhlu lokuhla ezantsi kuMhloli wePropathi.
Umxholo weseli uhlengahlengisa ukungqinelana nokukhetha ulungelelwaniso olukhethiweyo.
Ngenye indlela, unokufikelela kukhetho oluninzi lokufomatha, kubandakanya ukhetho lokulungelelanisa, ngokukhetha itafile kwaye ucofe ekunene (Windows) okanye ucofe ulawulo (Mac).
Ukuba ulandela la manyathelo angaphambili kodwa umxholo weetafile awulungelelananga, zama ezi ngcebiso zilandelayo:
Umyinge ophakathi we-zoloft
Ukuba usebenzisa inani elifanayo lamanani emva kwenqaku lokugqibela kuwo onke amanani akho, unokufumana ukuba balungelelane kwikholamu. Umzekelo, ukuba ixabiso elinye li- $ 12.99 kwaye elinye li- $ 14, bonisa le yokugqibela njenge- $ 14.00; emva koko, xa ulungelelanisa ekunene, amanani ayafola. (Ukuba iikholamu zakho azikabeki ngendlela ofuna ngayo, cinga ngokusebenzisa ifonti yemonospace).
Ukuba unengxaki yokulungelelanisa imixholo yeeseli ezikufutshane, setha ulungelelwaniso nkqo ukuya Phezulu. Unxunguphalo oluqhelekileyo lwenzeka xa unemigca emibini okanye nangaphezulu ecaleni kwelinye kunye nemifanekiso kwenye, kwaye ufuna umphezulu womfanekiso kunye nomphezulu wesicatshulwa ulungelelanise. Rhoqo abadwelisi ngenxa yokuba ubude babo bungafani.
Isisombululo silula: Khetha zonke iiseli ofuna ukuzilungelelanisa, nakuMhloli wePropathi, tshintsha ulungelelwaniso nkqo ukuya Phezulu. Kubonakala ngathi ngumlingo, wonke umxholo utsibela phezulu kwiiseli kunye nemigca ngokugqibeleleyo. Le yingxaki eqhelekileyo ukuba unokuseta ngokuthe nkqo ulungelelwaniso nkqo lweeseli zetafile ukuya Phezulu.
Qiniseka ukuba usebenzisa ifomathi efanayo, umhlathi, kunye nokwaphula iithegi ukuba ufuna imixholo yeeseli ezikufutshane zilungelelanise. Enye imeko apho imixholo yeeseli ezikufutshane ingadibani kakuhle yenzeka xa ubandakanya iithegi zomhlathi ezijikeleze isicatshulwa okanye umfanekiso kwiseli enye kodwa hayi kwenye.
Sebenzisa ukwahlulahlula umbono (ngokunqakraza kwiqhekeza kwiqhosha eliphezulu kwindawo yokusebenza) kwaye uqiniseke ukuba ikhowudi kuzo zombini iiseli iyahambelana. Ukuba unayo
iitagi ezijikeleze imixholo kwiseli enye hayi kwenye, qiniseka ukuzibandakanya kwiseli yesibini okanye uzisuse kwezokuqala ukuze zombini iiseli zilingane.
prednisone 20 mg 2 amacwecwe yonke imihla
yintoni iziqwengana ze-lidocaine
uyifaka njani iWindows 8.1
indlela yokulinganisa amadoda esinqeni
indlela yokwenza ubuchule bokuphinda ilitye elibomvu
loluphi udidi lweziyobisi lukhula